Proceedings of the Mekong Symposium on Migration; Migrants from the Mekong Neighbourhood “Living Together: Seeking Effective Responses to Enable Integration and Social Cohesion” (2013) > Mekong Migration Network
Proceedings of the Mekong Symposium on Migration; Migrants from the Mekong Neighbourhood “Living Together: Seeking Effective Responses to Enable Integration and Social Cohesion” (2013)
Despite increased discussion among governments and civil society organisations on labour migration issues in the GMS, there is limited evidence of the comprehensive and long-term vision necessary to achieve social cohesion between host communities and migrant communities in the region. It was therefore deemed timely for policymakers, migrants’ rights advocates, migrant representatives, representatives of inter-governmental organisations, and academic experts to discuss the concept of living together and how best to advocate for this. This symposium aimed to find methods to raise awareness among the general public and to explore ways to work together; migrants, civil society, and government authorities, to create social cohesion. From the deliberations of the three-day symposium, participants agreed onaset of recommendations to governments, ASEAN, civil society, and the media.
Click here to download the executive summary of the proceedings, which is available in the six official Mekong languages and English
ရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းဆိုင်ရာ မဲခေါင်ဒေသ ဆွေးနွေးပွဲ၊ မဲခေါင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများ အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းမှုနှင့် လူမှုစည်းလုံးညီညွတ် မှုကိုဖြစ်စေရန်ထိရောက်သော တုံပြန်မှုများရှာဖွေခြင်း
မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲရှိ လက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ မူဝါဒအများစုသည်၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများသည် ၎င်းတို့နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေသည့်အရပ်၌ ယာယီနေထိုင်သူ များဖြစ်သည် ဟူသောအချက်ကို အခြေခံထားခြင်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုသီး သန့်ခွဲခြားထားခြင်းဟူသောစိတ်ခံစားချက်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစိုးရများနှင့် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် GMS တွင်အလုပ်သမားရွှေ့ပြောင်းမှုကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆွေးနွေးမှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာသော်လည်း ဒေသတွင်းရှိ လူမှုရေးစည်းလုံးမှုကိုရရှိရန်လိုအပ်သော ပြည့်စုံသည့် ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သက်သေအထောက်အထားများမှာ အကန့်အသတ်ရှိနေပေသည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးထောက်ခံသူများ၊ ရွှေ့ပြောင် အလုပ်သမားကိုစားလှယ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပညာရေး ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည် အတူတကွယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းသဘောတရားနှင့် မည်သို့အကောင်းဆုံး စည်းရုံးလုံ့ဆော်မှုကို ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်သွားရန် သင့်လျှော်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤဆွေးနွေးပွဲ ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူလူထုအကြားအသိအမြင်မြင့်မားစေခြင်း၊ အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် နည်း လမ်းများကို ရှာဖွေခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရအာ ဏာပိုင်များမှ လူမှုပေါင်းစည်းရေးကို ဖန်တီးသွားရန်ဖြစ်သည်။